Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Andro fizahan-tany manerantany sy Google
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao farany Italia • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Resorts • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Google dia mirakitra ny fironana amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe notadiavina tao amin'ny Google Maps any Italia sy Eropa. Tamin'ny fankalazana ny Andro maneran-tany fizahan-tany, izay ankalazaina anio, 27 septambra 2021, ny motera fikarohana dia nanangona laharana itodiana italiana sy eropeana ary nanao recap ny fitaovana sy ny fandraisana andraikitra natsangana hanohanana ny indostrian'ny fizahantany.
Nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona ny fanarahana ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra any Italia amin'ny Google Maps.
Ny malaza indrindra dia: Colosseum, Amalfi Coast, Milan Cathedral, Gardaland, Trevi Fountain, Tower of Pisa, the Pantheon, Piazza Navona, Piazza del Popolo, and Villa Borghese.
Raha ny eran'i Eropa rehetra, ny tanjona folo tadiavina indrindra dia misy 3 any Italia.
Ny fahazoana ny folo voalohany any Eropa dia: Tour Eiffel (France), Basílica de la Sagrada Família (Espana), Musée du Louvre (France), Europa-Park (Alemana), Colosseum (Italia), Plitvička jezera (Kroasia), Amalfi Coast (Italia), Energylandia (Polonina), Katedraly Milan Duomo (Italia), Camp Nou (Espana).
Nandritra izay taona lasa izay, Google dia niara-niasa tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany tamin'ny alàlan'ny fanomezana fahitana, fitaovana tsy andoavam-bola ary fiofanana hampiharana ny fahaiza-manao nomerika hanohanana ny orinasa sy ny fizahantany fizahan-tany hiomanana sy hifanaraka amin'ny fomba vaovao.
Androany, ny motera fikarohana dia nandefa fitaovana sy hetsika vaovao hanampiana ny orinasan'ny fizahantany hiditra sy hifandray amin'ireo olona amin'ny Internet.
Anisan'izany ireo fiasa vaovao an'ny Google Search hanampiana ny olona hahita zava-manintona, fitsangatsanganana, na hetsika hafa. Rehefa mitady zavatra manintona ny olona, ​​toa ny Eiffel Tower, misy modely vaovao hampiseho rohy mankany amin'ny tapakilan'ny fidirana amin'ny boky sy safidy hafa raha misy. Ny serivisy dia misy manerantany amin'ny teny anglisy, ary ny mpiara-miombon'antoka dia afaka mampiroborobo ny famandrihana tapakila tsy andoavam-bola, mitovy amin'ny rohy famandrihana hotely maimaim-poana natomboka tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Fitaovana iray hafa dia ny mifandraika amin'ny fahalalana ny fanoloran-tenan'ny hotely momba ny faharetana mivantana ao amin'ny google.com/travel. Raha ny marina, ny fironana amin'ny fikarohana dia mampiseho fitadiavana fitadiavana safidy safidy maharitra maharitra, porofon'izany ny fikarohana ny "hotely eco", izay nitombo hatrany hatramin'ny 2004.
Manomboka amin'ity volana ity, ny fikarohana ireo rafitry ny trano fandraisam-bahiny dia miaraka amina faritra antsipiriany miaraka amin'ny lisitr'ireo hetsika noraisin'ny hotely ho fanohanana ny faharetana sy ny mari-pahaizana "eco-Certified" eo akaikin'ny anaran'ilay rafitra.
Ary farany, Google dia nanatevin-daharana ny fiaraha-mitantana Travalyst amin'ny maha mpikambana mpanorina azy hanampy amin'ny famolavolana modely manerantany sy misokatra amin'ny fanaovana kajy sy hijerena ireo fandefasan-karbaona an-dranomasina ary hanampy amin'ny famolavolana fenitra mitovy amin'izany ho an'ireo trano fandraisam-bahiny. Ny fikambanana - tarihin'i Prince Harry, Duke of Sussex, ary niorina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Booking.com, Skyscanner, Trip.com, ary Visa - dia tsy mitady tombom-barotra ary miasa mba hanampiana amin'ny fanovana mba hahatonga ny dia maharitra maharitra sy tsy ho eo intsony. akany fotsiny.